By David Nicholson, Erin Imon Gavin
Bishii Sebtember 2020, McKnight wuxuu bilaabay mid cusub Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah (V&EC) barnaamijka, oo lagu doonayo in mustaqbal firfircoon loogu dhiso dhamaan reer Minnesota awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Barnaamijku wuxuu koobayaa afar xeelado: in la dardar galiyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, la dhiso hantida bulshada, la beero nidaam guriyeyn cadaalad iyo cadaalad ku dhisan, lana xoojiyo ka qeybgalka dimuqraadiyadda. Waxaan ku soo saarnay xeeladahaas wada tashi dhow la-hawlgalayaashayada bulshada.
Dardargelinta Dhaqdhaqaaqa Dhaqaalaha
Dhisida Hantida Beesha
Samee Nidaam Guriyeyn Caddaalad iyo Caddaalad ah
Markaan dhammeyneyno barnaamijka maalgelinta V&EC wareegiisii ugu horreeyay — oo aan horay u fiirino baaritaanka xiga ee soo socda waqtiga kama dambaysta ah bisha Janaayo - waxaan dooneynaa inaan la wadaagno fikradaheenna hore iyo waxoogaa hagitaan ah la-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha ah ee shaqadeenna suurta geliya.
Si aan u bilawno, waxaan dareemeynaa inaan hoos udhacnay jawaabta jawaab celinteena bilowga ah ee Oktoobar. Waxaan helnay 128 weydiimo maalgelin ah - qiyaastii afar jibaar tirada aan sida caadiga ah fileyno. Nasiib darrose, waxaa naga maqnaa ilihii dad iyo maaliyadba si aan ugu marti-qaadno soo-jeedinno buuxa in ka badan boqolkiiba 29 su'aalaha badan ee bilowga ahaa ee na soo gaadhay. Xaqiiqadani waxay nagu riixday inaan sifeyno istiraatiijiyaddeenna oo aan u caddeynno qaabka aan u wajahayno go'aan qaadashada - geeddi-socod garasho oo aan filayno inuu sii socon doono illaa 2021-ka.
Mawduucyada Maalgelinta Wareegga Koowaad
Xusuusnow in kuwani ay yihiin barasho bilow ah, waxaan ku aragnay waxyaabaha soo socda ee guud ee kooxdii ugu horreysay ee weydiimaha u gudbay marxaladda soo-jeedinta buuxda:
Waxaa hogaaminaya Madow, Asal ahaan, ama dad midab leh (BIPOC). Qiyaastii saddex-meelood laba ka mid ah ururadii ama dadaalladii horumarey ayaa is-caddeeyey sida BIPOC hoggaaminayso. Fadlan fiiri su'aasha 18aad ee kan Barnaamijka V&EC FAQ qeexitaanka McKnight ee kooxaha ay hogaaminayaan BIPOC.
Lammaanaha koowaad ee McKnight. Qiyaas ahaan saddex-meelood meel ka mid ah weydiimaha horay u maray, haddii la maalgeliyo, waxay noqon doonaan wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha cusub ee McKnight.
Ka shaqee Minnesota Weyn. Saddex meelood meel ka mid ah codsadayaasha la casuumay waxay damacsan yihiin inay ka shaqeeyaan Minnesota weyn
Miisaaniyad sanadeed kayar. Miisaaniyadaha weydiimaha horumarsan ayaa ka yaraa kuwii ay lahaayeen wada-hawlgalayaasha deeq-bixiyeyaasha ee McKnight.
Kala soocyadan ayaa ka tarjumaya ballanqaadyada barnaamijka V&EC ee ku aaddan horumarinta sinnaanta jinsiyadda iyo ballaarinta shaqadeena iyo xiriirkeenna gobolka oo dhan. Weydiimaha horumarsan ayaa sidoo kale wadaagay astaamahan:
Muraayadda sinjiga, dhaqanka, iyo / ama dhaqaalaha. Kooxda ayaa weydiisay horumaro si gaar ah u muujiyay hogaaminta bulshada ugu badan ee saameynta ku yeelatay arrimaha taagan.
Nidaamyada isbeddelka nidaamka. Weydiimaha ugu wax ku oolka badan waxay muujiyeen sida shaqada la soo jeediyay ay uga sii gudbi doonto taageerida shaqsiyaadka ama kooxaha yar yar si ay gacan uga geysato wax ka beddelka nidaamyada jira ama dhisidda kuwa cusub — badanaa iyada oo loo marayo isku dhafka abaabulka aasaasiga ah, dhisidda awoodda, dib u habeynta siyaasadda, iyo istiraatiijiyadda isgaarsiinta iyo isbeddelka sheekada.
Macnaha guud. Waxay ka caawisay kooxda inay fahmaan sida shuraakada suurtagalka ah ay ugu dhexjiraan goob ama dhaqdhaqaaq. Yay yihiin jaaliyadooda muhiimka ah, aan macaash doonka ahayn, dowlada, iyo / ama shuraakada ganacsiga gaarka loo leeyahay? Sidee shaqada la soo jeediyay ugu xirmi doontaa dadaallada ballaaran iyo / ama dhaqdhaqaaqa ka socda gobolka?
Saameyn isku dhafan. Dhowr weydiimo oo awood badan ayaa sawir ka bixiyay sida shaqada la soo jeediyay ay isugu xirtay hal ama in ka badan istiraatiijiyadda barnaamijka V&EC ama sida ay buundooyinka uga dhistay qeybaha iyo / ama bulshada si loo gaaro saameyn qoto dheer.
Codsadaha Talaabooyinka Xiga
Waxaan rajeyneynaa in codsadayaasha ka fikiraya baaritaanka maalgelinta bisha Janaayo ay ka heli doonaan talooyinkaan kuwo waxtar leh:
Tixgeli mowduucyada kor ku xusan ee ka soo baxay wareegii koowaad ee maalgelinta oo dib u eeg waxa ma maalgelinno si aad ugu wargeliso go'aankaaga inaad soo gudbiso.
Akhriso kaayaga Barnaamijka V&EC FAQ, hage dhammaystiran oo ka jawaabaya su'aalaha guud.
Booqasho boggayaga wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan qaabkeena iyo sida loo codsado.
Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah ka dib markaad fiiriso ilahaas, fadlan la xiriir Renee Richie, yaa kugu xiri doona xubin V&EC ah.
Kooxdayada waxaa ka go'an inay sii xoojiso waxbarashadeena sanadka 2021 ayna sii waddo nadiifinta istiraatiijiyadeena iyo hababkeena. Waxaan ku dadaalnaa inaan si cad uga hadalno diiradda aan saarnay hadana waxaan qireynaa madmadowga maadaama barnaamijku qaabeynayo. Markaan milicsanayno oo aan baranayno, waxaan kula wadaagi doonnaa fikradahaaga. Waxaan ku faraxsanahay shaqadaada si aad u dardargeliso horumarka wadajirka ah ee aan ugu aadnay Minnesota oo leh awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal.